यी हुन् उड्नुअघि जहाजको इन्जिन जाँच्ने इञ्जिनियर दाजु–बहिनी ! - Nepalese Times
राजेन्द्र पाण्डे बन्ने भए वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री, शालिकराम जम्मकट्टेलले गरे यस्तो प्रस्ताव ! 15 मिनेट अघि
माओवादीले तोक्यो ३२ विभागका प्रमुख, कुन विभागको जिम्मेवारी कसलाई ? (सूचीसहित) 55 मिनेट अघि
नेप्लिज संवाददाता १२ आश्विन २०७८, मंगलवार १५:२६ (3 हप्ता अघि) ६४८ जनाले पढ़िसके
काठमाडौं । ‘राइट ब्रदर्स’को ‘बालसुलभ बदमा’सी’ र ‘सपना’ आज आकाशमा उडिरहेका जहाज हुन्। विल्भर र ओर्भिल दुई दाजुभाइको सपनात्यति बेला जागेको थियो, जतिबेला उनीहरूको उमेर ११ र ७ वर्ष मात्र थियो।